Ushicilelo loLenovo Z6 loLutsha: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuSungulwa | I-Androidsis
Ushicilelo loLutsha lweLenovo Z6 lwenziwe ngokusemthethweni
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sifumene ukuvuza kokuqala kwaye ngoku kusemthethweni. Ushicilelo loLenovo Z6 loLutsha luzisiwe ngokusemthethweni. Ekuqaleni kweveki iinkcukacha zokuqala zavuza yale fowuni intsha yohlobo lwesiTshayina. Ngoku siyazi yonke into malunga nale fowuni intsha ivela kumenzi, eyaziswa ngaphakathi kwinqanaba layo eliphakathi.
Olu Hlelo loLutsha lweLenovo Z6 luboniswa njenge Eyona fowuni inomdla kweli candelo lentengiso. Ingakumbi kuba iza nexabiso elifanelekileyo lemali. Uyilo lwangoku, kunye neenkcukacha ezintle kunye nebhetri enkulu. Yintoni enye esinokuyilindela?
Uyilo lwefowuni alubonakalisi mininzi kakhulu, njengoko besele sibonile kule veki. Uphawu lwesiTshayina luzinikele kwiscreen esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi, olona lwakhiwo luqhelekileyo kwi-Android namhlanje. Kwelinye icala, basishiya neekhamera ezininzi zangasemva, apho inzwa yeminwe yefowuni ikhoyo.
1 Ukucaciswa koHlelo loLutsha lweLenovo Z6
Ukucaciswa koHlelo loLutsha lweLenovo Z6
Olu Hlelo loLutsha lweLenovo Z6 ifowuni elungileyo kolu luhlu oluphakathi lweprimiyamu kwi-Android. Isebenzisa iprosesa ngokugqwesa kweli candelo lentengiso, ineempawu ezintle, ezinjengebhetri enkulu. Ukongeza, iikhamera zayo lelinye lamandla omnxeba. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo, esele siyazi inxenye:
Isikrini: 6,3 intshi 2340 x 1080 isisombululo sepikseli
Inkqubo: IQualcomm Snapdragon 710
i-ram: I-4/6 GB
Ukugcina ngaphakathi: I-64/128 GB (iyandiswa nge-MicroSD ukuya kuthi ga kwi-256 GB)
Ikhamera yangaphambiliI-16 MP
Ibhetri: 4050 mAh ngentlawulo ekhawulezayo ye-15W
ConectividadI-SIM ezimbini, i-4G, i-802.11 a / b / g / n / ac, i-Bluetooth 5.0, i-USB C, i-minijack, i-GPS ezimbini
Inkqubo yokusebenzaI-Android Pie
UbukhuluUbukhulu: 156,6 x 74,3 x 7,99 mm
U bunzima: Iigram ezili-164
Ezinye zeenkcukacha zale fowuni bezisele zisaziwa kuthi. Ngokuqinisekileyo ibhetri iya kuba yenye yeefowuni. Ibrand isishiya nomthamo weebhetri ze-4.500 mAh, eya kuthi inike inkululeko elungileyo. Ukongeza, iza nokutshaja ngokukhawuleza, ngokungathandabuzekiyo into enomdla kubathengi abaninzi abafuna ukuthenga ifowuni. Sikwafumana indibaniselwano eyahlukeneyo yefowuni ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Ke unokukhetha eyona inomdla kakhulu kuwe.
Kwelinye icala, iikhamera yenye yamandla olu Hlelo loLutsha lweLenovo Z6. Njengoko sibona kwiimodeli ezininzi phakathi kuluhlu oluphakathi kwi-Android, usishiya nekhamera ngasemva kathathu. Ezinye iikhamera ezifika zinikwe amandla yiArtificial Intelligence, esibonelela ngeendlela ezongezelelekileyo zokufota, ukongeza ekufumaneni indawo ngawo onke amaxesha. Ke sinokuthatha iifoto ezilungileyo ngalo lonke ixesha ngefowuni. Inzwa enye isetyenziselwa umphambili, kule meko i-16 MP, njengoko iqinisekisiwe namhlanje. Kuza nobukrelekrele bokuzenzela.
Olu Hlelo loLutsha lweLenovo Z6 Sele inikezelwe ngokusemthethweni e-China. Okwangoku asinalo ulwazi malunga nokwaziswa kwefowuni kumazwe aphesheya. Le yenye yamathandabuzo aphambili malunga nale modeli. Ke ngoko, kuya kufuneka silinde inkampani ngokwayo ukuba isinike ulwazi oluthe kratya malunga noku. Siyathemba ukuba iza kuphehlelelwa eYurophu, nangona ukuhanjiswa kweefowuni zebrendi kungasoloko kuyeyona ilungileyo.
Sifumana iinguqulelo ezininzi zoHlelo loLutsha lweLenovo Z6 ngokwe-RAM kunye nokugcinwa. Kuya kubakho imibala emibini yefowuni. Kwicala elimnyama, ukubheja okuqhelekileyo kwaye okwesibini luthuli lwendawo. Umbala oluhlaza okhazimlayo, njengoko sibona kwiifoto. Amaxabiso efowuni:
Inguqulelo ene-4/64 GB ibiza i-1099 yuan, emalunga ne-142 ye-euro ukuyitshintsha
Imodeli ye-6/64 GB inexabiso nge-1399 yuan (malunga ne-181 euro ngexabiso lotshintshiselwano)
Inguqulelo yefowuni ene-6/128 GB iza nexabiso le-1699 yuan, emalunga nee-euro ezingama-220 zokutshintsha
Ucinga ntoni ngale fowuni intsha ivela kwitshayina?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Ushicilelo loLutsha lweLenovo Z6 lwenziwe ngokusemthethweni
I-Pokémon Rumble Rush ikhutshwe ngokusesikweni kwi-Android